Ane chokuita Islam | Apg29
Reader Mail ne Stefan Eliasson
Seizvi unoruramisa nayo kuti zviito. Louisa uye Maren havasi akasiyana, munguva ichangopfuura akawana vakawanda guva ne 34 musoro vaKristu Libya.
Nei tichifanira kudzidza zvakawanda pamusoro Islam? Kufarira muduku asi zvikonzero vakawanda sei vanhu vakawanda vanoda kuvandudza ruzivo rwavo.
The noukuru hwawo chimwe chikonzero, Islam ndiyo nhoroondo rechipiri pakukura chitendero pashure chiKristu. Zvinenge mabhiriyoni 1,6 vanhu, pamusoro cheshanu vepasi vari vaMuslim, nhamba kuti inoramba ichiwedzera, kwete nokuti vanhu pachavo kusarudza kubvuma kuti zuva ose manheru richivira une madhaka tsime (Korani 18:84), asi nekuti nokusaziva, kutyisidzirwa norufu vaya vanoda kuenda, mukuru kuberekwa prices uye kutama.
Kuwanda vaMuslim muSweden uye dzimwe nyika dzokuEurope akaita raputika mumakore achangopfuura uye vazhinji saka vanhu vakatipoteredza zvavakagoverwa mavambo, zvakakosha kuziva zvavari kumiririra.
Kusaziva zvinotaurwa Koran uye hadith rinoti iguru kunyange mukati Islam. Ruzhinji VaMuslim vanotenda kuti Islam ndiye chete chokwadi chisingarambiki, zvino izvi ndizvo vakaudzwa zvose hwavo. Panguva iyoyowo, vanodzidza havana kubvunza zvinotisimbisa vaMuslim.
The vaMuslim uyo vatendeukira Islam aita ichi kubva kakawanda kunge akadyiswa mashoko enhema. Vanhu vatendeuka mushure adzidza Magwaro vari apo neapo.
"It inokodzera kwete akatendeka kana murume mukadzi akatendeka, apo Allah uye Mutumwa wake kusarudza chimwe chinhu, kuti vakasununguka kusarudza panyaya iyi, uye iye anoramba Allah Yake Muapostora, ari mujeri pachena kukanganisa." (Korani 33 : 36)
"Mupositora waMwari hamuna ikozvino agamuchira muenzaniso wakanaka iye anotarisira muna Allah uye Okupedzisira Day, uye kakawanda udane Mwari." (Korani 33:21)
Nokuti ruzivo Christian Zvinokosha apo Islam inokanganisa Bhaibheri mukati. Patinoshanda Evhangeri hama yedu vagari vaMuslim, tinofanira kuziva kuti pombonyedza shoko isu vanouratidza. VaKristu vanoti somuenzaniso kuti Jesu ndiye Mwanakomana waMwari. Nokuti muMuslim, izvi zvinoreva kuti Mwari anofanira kunge akaita zvepabonde nomukadzi uye waiva mwanakomana, ipapo ndizvo chaizvo zvinodzidziswa Koran inodzidzisa.
"Sei kuti zvirokwazvo denga nenyika vana, ipapo haana mukadzi?" (Korani 6: 101)
Ndizvo Utatu. No muKristu yati munhoroondo kana vakatenda kana akataura kuti Utatu zvaisanganisira Mwari, Jesu uye Mary. Dzidziso iyi yakavhiringidzwa neDare Korani kuti vanodzidzisa vaMuslim kuti izvi ndizvo zvatinotenda.
"Kunyange kana Mwari akati, Jesu, mwanakomana waMaria, sei iwe uti kuvanhu:" Tora ini naamai vangu sezvo vanamwari panzvimbo Mwari! (Koran 5: 116) ' "
NdiSatani chaiye pakutenda kwechiKristu Jesu 'rufu, kumuka uye humwari. Islam kwete chete anoramba izvi zvose, asi dzidziso idzi, tinofanira kazhinji kudzivirira kana vaMuslim vakadzidziswa kurwisa izvi.
"Zvino vakati, Isu zvirokwazvo makauraya Kristu Jesu mwanakomana waMaria, mutumwa waMwari, asi ivo havana vakauraya kana pamuchinjikwa asi ivo sokuti navo saka chete, uye vaya nharo nezvazvo, zvechokwadi kwave isingagari, nekuti havana hapana vamuziva, asi chete zvekungofungira kuita; havana akamuuraya muupenyu chaihwo, asi Mwari akamumutsa nokuti Mwari ane simba uye akachenjera. (Koran 4: 156) '
Where kwekusaziva kuri mukuru
Munyika umo kusaziva mukuru, apo Islam Anonakidzwa zvakanakisisa. Sweden ndiyo muenzaniso wakanaka uyu. The vakawanda mukusaziva anoita nhau, vezvematongerwo enyika uye vaparidzi Muslim vanogona kutaura uye vanhu vanozvitenda.
Mienzaniso iyi ndiyo kasingaperi zvatinonzwa nemunhu Imam pashure perimwe nemagandanga zvinouraya muzita Allah kuzorwisa hakunei chokuita Islam. Tinowanzonzwa kuti Somuenzaniso, Muhammad aiva nevakadzi rworudyi murwi sezvo isu kuMadokero anoremekedza rusununguko nevakadzi. Ava nhema, asi vanhu vanotenda mariri.
Majaya maviri musoro
Tinogona Louisa Vester womumusha Jespersen uye Maren Ueland muenzaniso, vakadzi vaviri vechiduku zvoutsinye musoro pazororo MuMorocco. Mumwe pa chirangaridzo mhemberero vachiti kuti kwoumhondi havana chokuita Islam uye mamiriro SVT ndiye mheni anokurumidza chihuri kuti. Izvi zvose uye chete chokuita Islam.
Cherechedza kuti umhondi aiva chikwata nesimba, iyo ari yakawanda. Ndakanga akaudza shamwari dzangu kuti taida kuuya pamusoro vashanyi vaviri, noutsinye halal uuraye kwavari, kuzoposhera zvose uye kuposita pamusoro evanhu vezvenhau kuti vakanga vaita nechokwadi kuti ini mujeri. Chii unoruramisa mhondi Zvinyorwa? Nokuti Koran uye hadiths!
"Muhoro wavo, izvo kundorwa Mwari Yake Muapostora, uye instigate zvakashata panyika, Unofanira kungoziva kuti kuurayiwa kana pamuchinjikwa, kana vane maoko avo namakumbo adziviswa crosswise, kana kuti ivo kuva akadzingwa munyika. Izvi unofanira kunyadziswa kwavo muupenyu huno, uye upenyu kuuya zvinochimbidza chirango inotyisa. "(Korani 5:37)
Chii ane vashanyi vaviri chokuita kujeka kugumbusa "kurwa Mwari Yake Muapostora, uye instigate zvakashata panyika"? Louisa uye Marens muurayi akapika mhiko kuna IS. Vose Norway uye Denmark tiri chikamu yose muhurumende akonzera munzira dzakasiyana-siyana kuti varwise IS. Louisa uye Maren mari kundorwa IS nokubhadhara mitero uye nokudaro nemhosva pamusoro mhosva.
"Uyo anoshongedza ari murwi mhaka Allah, achawana mubayiro wakafanana ake, pasina kuti detracts kubva murwi mubayiro muna kuchangotanga." (Sunan Ibn Majah 2758)
Misa guva ne 34 musoro vaKristu
Tinoziva kuti Islam ndidhiyabhorosi ari musoro Association Chirevo. Jesu ndiye yeko uye chechi ndiyo muviri uye zviri pachena kuti Satani anoda kusiyanisa pavo.
Vachitarisira kudzoka kwaJesu, Stefan Eliasson